Tari-dalana Toriteny Alahady 03 Jolay 2016 (Alahady faha-6 manaraka ny Alahadin’ny Trinité) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 03 Jolay 2016 (Alahady faha-6 manaraka ny Alahadin’ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro atolotra anareo indray ary ny tari-dalana momba ny texte izay hotoriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha 03 Jolay ho avy izao (VI manaraka ny Trinite).
Ao anatin’ny toritenin’i Jesosy tao an-tendrombohitra ka ao anatin’ireo antsoina hoe “antithesis” 6, izany hoe, ao anatin’ny fanazavan’i Jesosy araka ny fombany (“Efa renareo fa voalaza hoe….Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe…”) ireo Lalàna samihafa ao amin’ny TT no misy ity texte izay anjarantsika ity (Mat 5:21–48). Azo lazaina fa ny and 20 sy 48 no mamefy ireo “antithesis” 6 ireo. Izany hoe, ny filazan’i Jesosy fa “Raha tsy mihoatra noho ny an’ny Mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra ny Fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo” (and 20) sy ny hoe “Koa amin’izany, aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahan’ny Rainareo izay any an-danitra” (and 48). Azo tsoahina avy amin’ireo andininy roa fefy ireo fa “Ny fahatanterahana tahaka ny fahatanterahan’ny Ray izay any an-danitra no fahamarinana mihoatry ny fahamarinan’ny Mpanora-dalàna sy ny Fariseo ka hidirana ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra.” Ireo “antithesis” ireo anefa dia manaporofo fa tsy efan’ny olona amin’ny maha Olombelona azy ny hanana izany fahatanterahana na fahamarinana mihoatr’izay ananan’ny Mpanora-dalàna sy ny Fariseo izany. Ny miantoraka eo amin’ny hazofijalian’i Jesosy mba handray ny asam-pamoronana vaovao avy amin’izany ihany no ho tanteraka tahaka ny Ray sy hananana izany fahamarinana mahatafiditra ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra izany. Andeha àry hitodika amin’ity texte anjarantsika ity isika.
1. Ny Fahamarinana manoloana ny Didy hoe “Aza mamono Olona” (and. 20–22)
Noharian’Andriamanitra ho tahaka ny endriny ny Olombelona (Gen 1:26–28). Ny famonoana Olona àry dia tsy ny crime atao amin’ilay olona ihany fa ny fandravana na ny fanaovana tsinontsinona ihany koa izany asan’Andriamanitra izany na fanoherana an’Andriamanitra sy ny fikendreny tao amin’izany famoronana ny olombelona ho tahaka ny endriny izany. Izany hoe, ny famonoana olona dia tsy amin’ny alalan’ny fandatsahana ny ainy ihany fa amin’ny alalan’ny fampietrena azy hidina amin’izay toerana maha Olombelona azy izany ihany koa, na amin’ny lafiny manao ahoana izany na amin’ny lafiny manao ahoana. Hitantsika izany eto amin’ny texte, ny fanazavan’i Jesosy ny didy hoe “Aza mamono olona” dia tohizany amin’ny hoe “izay manozona na manambany (dikan-teny marina) ny rahalahiny hoe ‘Olom-poana’ (ῥακά: lack of intelligence, foana tsy misy n’inona n’inona ny lohany, olona sanana, dondrona, tsy misy dikany) hianao… na “foka ialahy” (μωρός, eng. foolish, stupid, olona adala). Izany hoe, izay rehetra manambany na mampietry na manozona na manompa ny rahalahiny na ny olombelona manodidina azy dia mpamono olona avokoa. Izay tezitra ka tafalatsaka amin’izany no lazaina fa manota ao anatin’ny fahatezerany (ampit. tezera fa aza manota): ny endrik’Andriamanitra ao amin’ilay olona mihitsy no atao tsinontsinona.
Sarotra ho an’ny olona araka izany ny manana fahamarinana mihoatry ny fahamarinan’ny Fariseo sy Mpanora-dalàna manoloana ity didy ity. Ny fananana fo feno fitiavana (agape) ny rahalahy no hahafahana mitandrina izany na dia ao anatin’ny fahatezerana aza (ampit. ny fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: fitiavana mampiakatra ny mahaizy azy izay nanambany tena). Araka ny fitarihan-teny teo ambony, ny fiantorahana eo amin’ny hazofijaliana mba hananana fo vaovao no hahaizana mitepo izany fitiavana izany.
2. Ny Olona mihavana amin’Andriamanitra (manana ny fahamarinana mendrika ny Fanjakan’ny lanitra) dia izay mihavana amin’ny rahalahiny koa (and. 23–26).
Ny hoe “miditra ny Fanjakan’ny lanitra” dia midika hoe “mihavana amin’Andriamanitra”. Ny hoe “mihavana amin’Andriamanitra” koa anefa dia midika hoe “mihavana amin’ny rahalahiny” na “mihavana amin’ny mpiaramonina na mpiara-mivavaka aminy”. Fihavanana tsy misy fihatsarambelatsihy no lazain’i Jesosy eto. Ny olona manana izany fihavanana feno (amin’Andriamanitra sy ny olona) izany no marina mendrika ny Fanjakan’ny lanitra. Tsy tafiditra ny Fanjakan’ny lanitra izany izay olona mihevitra fa tsara fihavanana amin’Andriamanitra kanefa manana ady amin’ny mpiaramonina aminy. Raha izany no misy dia anarin’i Jesosy mba hihavana amin’izany olona izany aloha isika. Tsarovy fa eto, raha ny teny fototra no jerena, dia tsy ilay olona nanao fahadisoana na heloka nahatezitra no tenen’i Jesosy sy anariny hihavana fa izay nanaovana izany kosa. Izany hoe, na tsy avy aminao aza ny fahadisoana na ny heloka nahatonga ny ady na fisarahana, tsy marina eo anatrehan’Andriamanitra ianao raha tsy manao dingana hihavana amin’ilay olona izay nanao fahadisoana na heloka taminao. Sarotra izany, kanefa izany no hanahafana an’Andriamanitra Ray amin’ny fahatanterahany (ampit. and. 48) teo amin’ny fanorenany indray ny fihavanana tamintsika zanak’olombelona ka hananantsika ny fahamarinana mihoatr’izay ananan’ny Fariseo sy Mpanora-dalàna ka hidirantsika ny Fanjakan’ny lanitra.
Ny fiombonantsika amin’ny hazofijalian’i Jesosy Kristy izay nampihavanan’Andriamanitra ny olona tamin’Izy tenany no hanahafantsika Azy ka hahaizantsika mihavana amin’izay manana ady amintsika koa ka hananantsika izany fahamarinana maha mendrika ny Fanjakan’ny lanitra izany (ampit. Efes. 2:11–22).
Ry Havana, te-hiditra ny Fanjakan’ny lanitra ve ianao? Aoka hanahaka an’Andriamanitra amin’ny fahatanterahany noho ny fandraisanao ho anao ny asam-panavaozan’i Jesosy Kristy teo amin’ny hazofijaliana izany dia ho hitan’Andriamanitra ho marina tandrify izany ianao.
Voninahitra anie ho an’Ilay Mpampihavana. Amen!
Fibebahana sy Fifonana
Inona ny hoe mibebaka raha mitaha amin’ny hoe mifona ary ahoana ny fiainana ny famelan-keloka ? Ity resaka ity dia niainga amin’ny fanontaniana ...Hanohy hamaky